INDLELA YOKUJONGA ABANTU ABASANDUL 'UKUTSHATA - IZIPHO
Eyona Izipho Uyenza njani ngokuchanekileyo iMitshato yokutshata kubantu abasandul 'ukutshata
Musa ukuvumela isipho sobubele sichithe. iStock
UMaggie Seaver nguMhleli weDijithali yokuNxibelelana kwi-RealSimple.com.
UMaggie ubhala ngobomi, umsebenzi, impilo kunye nokunye.
UMaggie wayengumhleli kwiKnot ukusuka kwi-2015 ukuya kwi-2019.
Ukuhlaziywa ngoMatshi 30, 2019
Abantu abasandul 'ukutshata bayakuthanda ukufumana izipho zomtshato — bahlala benazo, kwaye baya kuhlala benazo. Izipho zemali, nokuba zinikezwe ngokwasemzimbeni okanye ngokwamanani ngokwerejista yemali efana neKnot Newlywed Fund, inokunceda ekuboneleleni ngento isibini esisithandayo okanye esisifunayo (okanye zombini). Kuxhomekeka kwisibini esitshatileyo, oko kunokuthetha nantoni na: iholide yasemva komtshato ephuphuma eMzantsi weFrance, isidlo sangokuhlwa kwindawo yokutyela eneenkwenkwezi zeMichelin okanye ukugcina imali yokufumana umntwana. Ukufunxa imali okanye itsheki ngaphakathi ekhadini kwaye uzise kwitheko lomtshato kusamkeleka ngokupheleleyo-kodwa ukuba uzisa itsheki, kufuneka yenziwe ngokuchanekileyo. Ngaphandle koko, abantu abasandul 'ukutshata abanakho ukuyifumana imali.
Ukuba oko kwenzekayo, uya kubanika imeko engathandekiyo njengesipho somtshato. Kuya kufuneka bakucele ukuba uphinde ukhuphe itsheki okanye ubhale ikhadi lombulelo ngesipho abangasokuze basisebenzise-yinto elahlekileyo kwiqela lonke. Ukuthintela imeko enje, thobela ezi zikhombisi zomtshato ziluncedo.
isipho sesikhumbuzo seminyaka ngeminyaka
1. Sebenzisa omabini amagama abo angaphambi komtshato okanye amabhinqa.
Uya kufuna ukwenza oku ngezizathu ezininzi. Nangona omnye okanye bobabini banokuceba ukutshintsha igama labo lokugqibela emva komtshato, banokufuna ukuhlawula isheke lakho ngaphambi kokuba bathi 'ndenza' ukunceda ukuhlawulela umtshato okanye iindleko zekhefu. Kodwa nokuba bayayifaka imali emva kokuba betshatile, inkqubo yokutshintsha kwamagama ithatha ixesha, ke esi sibini sinokubetha ibhanki ngebhanki ukuba itshekhi yakho yenziwe kumagama abo amatsha-asemthethweni.
2. Ncamathela kwigama 'okanye'.
Umdibaniso omncinci weteyiki upakisha i-punch kwitsheki yomtshato. Usebenzisa igama 'okanye' endaweni ka 'kunye' phakathi kwamagama abo amabini (umzekelo: 'uKim Jones okanye uJohn Smith') bayakuqinisekisa ukuba bayakwazi ukwenza imali kwitshekhi yabo-nokuba upela elinye lamagama abo gwenxa, elinye lamagama baya kuhlala bekwazi ukuyifaka. Ukuba ubhala 'uKim Jones noJohn Smith,' ibhanki inokufuna ukuba bobabini babekho ngexesha lediphozithi, okanye iakhawunti ibikula magama mabini (aka indlela ebhalwe ngayo kwitshekhi).
izipho zomtshato zomtshato
3. Buza — sukucinga.
Ukuba uyazi inyani isibini esele siqalisile ukusebenzisa amagama asemthethweni atshatileyo, jonga kabini ukuze uqiniseke ukuba ukwiluphu. Sukucinga ukuba umtshakazi uhambe indlela yesiqhelo kwaye uthathe igama lomyeni wakhe, okanye isibini esichaze amagama abo okugqibela sikwenze oko ngokulandelelana kwealfabhethi. Buza abazali babo okanye omnye umntu osondeleyo kwesi sibini ukuba acacise amagama abo amatsha asemthethweni.
4. Yibhalele umntu omnye.
Endaweni (ngokungachanekanga) yokuqikelela, cinga ukwenza umtshato wakho ujonge kwilungu lesibini osondelelene kakhulu. Oku kunokwenza kube lula kubo ukuba bafake imali kwaye ekugqibeleni badibanise iimali ezahlukeneyo ezinesiphiwo phantsi komgca. Kodwa nyathela ngononophelo xa usenza-ezinye izibini azingobalandeli bokwamkela izipho zemali ngokwahlukeneyo, ke kufanelekile ukuba uqhagamshelane nosapho okanye ipati yomtshato ukuze ufunde ukuthanda kwabo.
5. Usalahlekile? Jonga ukuba banayo irejista yekheshi.
Kutheni ubhala ubhala itsheki ukuba awunyanzelekanga? Intloko kwiwebhusayithi yomtshato wesibini ukubona ukuba bayifakile na isipho senkxaso mali njengenxalenye yobhaliso lwabo lomtshato (i-psst, ukugcina kwakho umhla kuya kuhlala kubandakanya ikhonkco labo lewebhu ukuba banalo-kungenjalo fikelela komnye umntu Ipati yomtshato yekhonkco.) Ukuba esi sibini sineNgxowa-mali esandula kutshata kunye nathi, bayakudibanisa iakhawunti yabo yebhanki, ukuze igalelo lakho lidluliselwe ngqo kwiakhawunti yabo (kungakhange kubonwe igama lomtshato elibonayo).
usonge njani itshefu yesuti
ibha yegumbi losapho
Umtshakazi we-lace ukuba abe ngumtya
Uthando lwakho luyamangalisa
yintoni oza kuyinxiba kumtshato we-Agasti